दुःखका सारथी दीपेन्द्र ! « Ok Janata Newsportal
दुःखका सारथी दीपेन्द्र !
काठमाडौं । काठमाडौं व्यस्त शहर, यहाँ कसैलाई कसैको बारेमा सोध्ने फुर्सद छैन । सबै आआफ्नो ध्यानमा तल्लीन हुन्छन् । एउटै घरमा बस्ने परिवारले समेत वारिपारीको घरको बारेमा जान्दैनन्, यताउताको कोठाको समेत जानकारी राख्दैनन् । एकै कोठामा पनि प्रविधिका कारण बाउछोरा, बुढी आफ्नै ध्यानमा हुन्छन् । महंगो शहर आफ्नै जीविका धान्न सबै नतमस्तक छन् ।
परिवर्तित समाजले शहरका मानिसको जीवनयापनलाई फरक तुल्याएको छ । गाउँमा हुँदो हो त, एक घरमा के पाकेको छ सारा गाउँमा बास्ना जान्छ ।
मीठो मसिनो पाकेको दिन सबैले चाख्न पाउँछन् । गाउँको खबरबारे सबै जाहेर हुन्छन् । आपसी भाइचारा, सद्भाव कायम राख्नछन् । अर्काको दुःखमा साथ दिन्छन्, कसैको चुल्हो निभ्ने डर हुँदैन ।
शहरमा पनि त्यस्ता मान्छे नभएका होइनन् तर यहाँको विकसित मानसिकताले मानिसको मन परिवर्तन गरिदिएको छ । छिटपुट मात्रामा केही पात्र शहरमा पनि छन्, अरुको दुःखमा साथ दिने । यसको एक उदाहरण बनेका छन् दीपेन्द्र श्रेष्ठ ।
नाम : दीपेन्द्र श्रेष्ठ
ठेगाना : मध्यबानेश्वर काठमाडौं
प्रदेशसभा सदस्य, बागमती प्रदेश, काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ ‘क’
काम : सामाजिक सेवा
दीपेन्द्र श्रेष्ठ हकी स्वभावका एक युवा । उनले सानै उमेरदेखि सामाजिक कार्यमा आफ्नो लगशीलता देखाए । यति चाँडै जनताको मन जितेर प्रतिनिधि बन्छु भन्ने सोच थिएन । तर, समयले दीपेन्द्रलाई पछ्यायो ।
दीपेन्द्र श्रेष्ठ हकी स्वभावका एक युवा । उनले सानै उमेरदेखि सामाजिक कार्यमा आफ्नो लगशीलता देखाए । यति चाँडै जनताको मन जितेर प्रतिनिधि बन्छु भन्ने सोच थिएन । तर, समयले दीपेन्द्रलाई पछ्यायो । सामाजिक कार्यमा तल्लीन युवालाई छोटो उमेरमै सांसदको बिल्ला भिरायो । राजनीतिक रुपमा भाषणलाई त्यति प्राथमिकता नदिने दीपेन्द्र कामले जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्छन् ।
एकाबिहानै उठेर बाहिरिएपछि राति घर फर्किने जनताका प्रतिनिधि दीपेन्द्रले काठमाडौंका जनताको हरेकको दुःखमा साथ दिनुभएको छ । उनलाई तल्लो तहसम्मका जनताको बारेमा अवगत छ । कसैलाई विपद् परेको होस् या खुसी दीपेन्द्रको त्यहाँ उपस्थिति रहन्छ । नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध उनी पार्टीलाई होइन व्याक्तिका दुःखलाई साथ दिन्छन् । काठमाडौंको शिक्षित जमातको जनमत बटुल्न त्यति सहज छैन तर दीपेन्द्रको लगनशीलता र कामले त्यसलाई सहज तुल्याएको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध उनी पार्टीलाई होइन व्याक्तिका दुःखलाई साथ दिन्छन् । काठमाडौंको शिक्षित जमातको जनमत बटुल्न त्यति सहज छैन तर दीपेन्द्रको लगनशीलता र कामले त्यसलाई सहज तुल्याएको छ ।
जनताको घरघरमा पुगेर सबै समस्यामा साक्षात्कार गर्ने सांसद पाएर काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ का जनता खुसी छन् । विगत निर्वाचनमा फरक पार्टीलाई मतदान गरेका जनताहरु अहिले पछुताएका छन् । दीपेन्द्रको लगनशीलतालाई देखेर आगामी निर्वाचनमा उनको विकल्प नभएको अनामनगरका एक मतदाताको भनाइ छ ।
‘सबैको मनमा हाम्रा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, काठमाडौंले राजनीतिमा धेरै योगदान गर्यो, हिजोका दिनमा उपत्यका भित्रिएकालाई छोरी सुम्पियो राजनीतिक लिडर बनायो तर प्रधानमन्त्री कहिल्यै पाएन– ती मतदाताले भने ।’ अब प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकलाई हाँक्न सक्ने क्षमता दीपेन्द्रजीमा छ ।
बिहानै उठेर दीपेन्द्रको स्कुटी स्टार्ट हुन्छ, काठमाडौंकोे भिडभाड छिचोल्न र जनताको घरमा छिटोछरितो पुग्न त्यहीँ स्कुटी उनको सारथी बनेको छ ।
काठमाडौंकै स्थायी बासिन्दा उनलाई कुनै कुराको कमि छैन तर अरुको दुःख देख्न सक्दैनन् । उनमा गाडी चढेर हिड्ने, विलासिताको जीन्दगी बिताउने चाहाना छैन । हुँदो हो त कमि पनि थिएन ।
जनताले नजिकबाट चिनेका तर मिडियाबाजी गर्न नरुचाउने दीपेन्द्रको कार्यको प्रशंसासहित ओकेजनता परिवारले यो सामाग्री तयार पारेको हो ।